🕚 २०७८ मंसिर १५ - १४:४२ मा प्रकाशित
चार दशक लामो राजनीतिक जीवनमा दुईपटक मन्त्री भइसकेपछि पनि राजनीति छोडेर कृषि क्रान्तिमा होमिँदा लोकेन्द्र विष्ट कृषिकर्ममा पनि जम्न सक्छ भन्ने धेरैले कल्पनासम्म गरेका थिएनन् । दश वर्षअगाडि मात्रै राज्यको नीति निर्माणतहसम्म पुगेको व्यक्ति अहिले कृषि कर्ममा मनैदेखि तल्लिन भएर लागेको छु । मैले कृषिमा लाग्ने प्रण गर्दै राजनीतिमा कहिल्यै नफर्कने प्रतिबद्धता गर्दा धेरैले विश्वास नै गरेनन् । तर, अहिले आफ्नो प्रतिबद्धतालाई वास्ताविकतामा परिणत गर्न सफल छु ।
राज्यको शासनसत्ता परिवर्तन गर्ने र देशको मुहार फेर्ने महत्वकांक्षा बोकेर राजनीतिक क्रान्तिमा होमिएको थिएँ । परिवार भने गाउँकै सामान्य कृषि पेसामै थियो । हाम्रो पुख्र्यौली पेसा पनि कृषि नै हो । कृषि कर्मले आफ्नो पुस्तैनी जीवन सुधार्न नसकिएको थाहा थियो तर पनि आधुनिक ढंगले कृषि गर्ने, व्यावसायिक बन्ने हो भने सम्भावना र अवसर जति पनि छ भनेरै कृषिमा होमिएको हुँ । किसान परिवारमा हुर्किएकाले मलाई माटोसँग खेल्ने विषयमा कुनै अत्यास पनि लागेन । तीन वर्षअघि (भदौ २०७५) देखि राजनीतिक महत्वकांक्षालाई छाडेर कृषि कर्ममा सक्रिय भएको हुँ । पछिल्लो समय कृषि पेसाप्रति आकर्षित युवा पुस्ताको आशा र भरोसासमेत गर्ने व्यक्तिको परिचय बन्दा खुसी लागेको छ । कृषिमा लाग्नु ठीक सात वर्षअगाडिको भदौमा पर्यटनमन्त्रीका रूपमा कृषि पर्यटनको सम्भावना खोज्ने योजना निर्माणमा तल्लिन थिएँ, अहिले कृषिले दिएको अवसरमा डुबुल्की मारिरहेको छु । दाङमा ड्रागन फ्रुट सुरु गर्नुअघि सुरुमा मैले काभ्रेको भकुन्डेबेसीमा ४३ रोपनी जग्गा लिएर खेती किसानीमा लागेको थिएँ । लगत्तै काठमाडौंको साँखुमा पनि १४ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर कृषि कर्म सुरु गरेँ ।
‘पार्टीले जनयुद्धको भावअनुसार काम गर्न पनि छाड्यो । कार्यकर्ता झोला बोकेर ठूला नेताको चाकरी गर्नमा मरिमेट्न थाले । जसले गर्दा धुपौरेगिरि गर्ने र एसम्यान भएर मात्रै जिन्दगी चलाउने प्रवृत्तिको विकास हुँदै गयो ।’
राजनीतिक भेटघाटका क्रममा कुनै कामको सिलसिलमा १७ वर्षअगाडि डा. जगन्नाथ राईसँग भेट भएको थियो । डा. राई उनै व्यक्ति हुन् जसले नेपालमा पहिलोपटक सिउँडी प्रजातिको ड्रागन फ्रुट भित्र्याउने काम गर्नुभएको थियो । उहाँसँगको भेटले मलाई एक प्रकारको ऊर्जा दियो । डा. राईले नै मलाई ड्रागन फल चिनाउने काम पनि गर्नुभयो । राईले दक्षिण कोरियाबाट ल्याउनुभएको बढी पौष्टिकता हुने र नयाँ प्रजातिको कालो चामल (ब्ल्याक राइस) को उत्पादनमा पनि मलाई जोड दिनुभयो । ब्ल्याक राइस कृषि क्षेत्रमा नयाँपनको प्रयोग थियो भने यसले कृषि काम गर्ने उत्साहसमेत थप्यो । व्यावसायिक बालीको खोज अनुसन्धान गर्दै जाँदा पहिल्याएको त्यही दुई उत्पादन (ब्ल्याक राइस र ड्रागन फ्रुट) अहिले मेरो जीवन परिवर्तनको संवाहक हुन पुगेको छ ।
‘सशस्त्र युद्धमा लागेको पार्टी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि कार्यकर्तामा काम नगरी खानुपर्छ भन्ने मानसिकता हावी हुँदै आएको थियो । जसले गर्दा गलत प्रवृत्ति विकास हुन थाल्यो । म आफूचाहिँ काम नगरी खाने प्रवृत्तिको विरोध गर्न थालें ।’
ड्रागन फल दुई प्रकारको उत्पादन हुन्छ । भित्र रातो र बाहिर पनि रातो भएको फल (रेड एन्ड रेड) को प्रतिकिलो आठ सय रुपैयाँमा दाङबाटै बिक्री भइरहेको छ भने भित्र सेतो र बाहिर रातो (रेड एन्ड ह्वाइट) प्रतिकिलो सात सय रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेको छ ।
एकपटक लगानी गरेपछि फेरि ठूलो लगानी गर्नु पर्दैन । पहिलो लगानी गरेर प्रतिफल दिने अवस्था आएपछि भने मल हाल्नुपर्ने, गोडमेल गर्नुपर्नेसहितको सामान्य काम मात्रै हुन्छ । हाम्रो अहिलेसम्म एकतिहाइ लगानी उठिसकेको छ । हालसम्म एक करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । कृषि कर्मले आफूलाई सन्तोष र आरामको निद्रा दिएको छ ।
नाफिज जर्नलबाट साभार
Previous articleमालपोत कार्यालयबाट १५ लाखको चेक र ५० हजार नगद घूससहित कार्यालय प्रमुख र अमिन पक्राउ
Next articleमौद्रिक नीतिको समिक्षापछि पहिलो पटक नेप्सको ब्याक गियरमा ब्रेक, कारोबार रकम भने घट्दो